आजको मौसम : पोखरामा कडा चिसो, देशभर कस्तो छ ? – Gandaki Voice
Home/देश/आजको मौसम : पोखरामा कडा चिसो, देशभर कस्तो छ ?
आजको मौसम : पोखरामा कडा चिसो, देशभर कस्तो छ ?
गण्डकी भ्वाइस Send an email4days ago
विश्वशान्ति स्तूपाबाट खिचिएको पोखरा उपत्यका । तस्वीर : विकिपिडिया
पोखरा, १ माघ ।
आज माघ १ गते पनि पोखराको मौसममा परिवर्तन आएको छैन । तीन दिनदेखि पोखराको मौसम बिग्रएकोमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । हिजो बुधबारको तुलनामा पोखरामा आज बढी चिसो महसूस भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजको मौसम पूर्वानुमान जारी गरेको छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ ।
महाशाखाले हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भइरहेको र तराई भूभागमा हल्का हुसु र कुहिरो लागेको जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी आज दिउँसो प्रदेश १, प्रदेश २ र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका भूभागमा आंशिक बदली रहेर देशका अन्य भूभागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ ।
यस्तै, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशको एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । राति प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूपश्चिम प्रदेशका धेरै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहि देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली हुने देखिन्छ। यता, प्रदेश नं १ का एक/दुई स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या नौ करोड नाघ्यो, नेपालमा कति ?
संविधानको रक्षाका लागि जनताले सचेततापूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ : उपराष्ट्रपति